Hogaanka Nabadgaliyada oo Harar Looga Yeedhay iyo Waxa ay Atoobiya ka Odhan Afduubka. – Rasaasa News
Jijiga, Jan 29, 2014 – Yeedhitaanka hogaanka nabadgaliyada iyo masuuliyiinta bogga Cakaara, ayaa timid, ka dib kolkii ay dhawaan cadeeyeen in xubno ONLF ah lagu qabtay xadka u dhaxeeya Kenya iyo degaanka Somalida.
ONLF, ayaa sheegtay in ciidamada Atoobiya ka afduubteen Nairobi, Kenya labo sarkaal oo ka mid ahaa gudigii wadahadalada Ethiopia iyo ONLF u dhaxeeyey, kuwaas oo u joogay sida la sheegay ka qayb galka mid kale oo la filayo.
Warbaahinta Geeska Afrika, gaar ahaan kuwa Somalida ayaa si xoog leh wax uga qoray arintan afduubka ee Nairobi.
Atoobiya ayaan iyadu waxba ka dhihin eedaynta. Lamana ogo in afduubka ay ku lug lahaayeen sirdoonka federalka Atoobiya iyo in ay ku egg tahay ciidanka degaanka.
Atoobiya ayaa wixii siyaasadeeda dibada dhaawacaya ee ka dhaca degaanka dusha u saarta dawlada degaanka Somalida.
Sida ay warar hoose sheegeen, dawlada Atoobiya ayaa aad uga xumaatay sheegitaanka ay warbaahinta degaanku sheegtay qabashada labadan xubnood. Waxaana haatan Harar looga yeedhay hogaanka nabadgaliyada Cabdullahi Yusuf Weerar iyo koox warbaahina, waxaana la filayaa in canaantooda loo sii gudbiya Addis Ababa.
Sanadkii 2009-kii ayey ahayd kolkii Dr. Maxmed Siraad Dolaal, ay ku dileen degmada dhanaan ciidamo uu watay sida la aaminsan yahay Sulub Cabdi Axmed, oo ah ninka haatan la qabtay.
Maydka Dr. Dolal, waxaa helay ciidamada Liyuu Booliiska sida la rumaysan yahay, waxaana maydkiisa Internet-ka dhigay Madaxwaynaha degaanka Somalida Cabdi Maxmuud Cumar [Cabdi-Iley] oo ahaa hogaanka nabadgaliyada xiligaas iyo qurbo-joog Ina Macalin Ilyaas oo degan Maraykanka, haatana ka shaqeeya degaanka.
Arintaas waxaa aad loogu canaantay Cabdi Iley, waxaana bilowday qorshe aan dhamaystirmin oo burcad lagu mariyay boogta Cabdi Iley damqay. Iyada oo heshiis hankaagay lala galay koox ONLF ah, oo kolkii dambe dalka laga saaray.
Xiligaas wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburka iyo guuldarooyin aan kala go,o lahayn ee soo gaadhayey maalin walba ONLF.
Waxaa la iswaydiin karaa, qabashada labadan xubnood oo ka mid ahaa wadahadalada ONLF iyo Atoobiya, joogayna dal dimoqraatiyad ka jirto darisna la ah Atoobiya, degan yihiin dad Somali ah oo u nasab sheegta degaanka Somalida, waxaa ay ku keeni doonto iyo waliba sida ay uga jawaabi doonto Atoobiya su,aashan.
Waxaa kale oo iyaduna walwal leh oo cid walba oo Somali ah ay wadnaha farta kaga haysaa sida ay ugu nabadgali karto Geeska Afrika.
Jijiga: Arday ku dhimatay Jaamacada Haramaya